Al-Shabaab oo lacag kusoo rogay dhismaha jidka xiriiriya……………. – KHAATUMO NEWS
Al-Shabaab oo lacag kusoo rogay dhismaha jidka xiriiriya…………….
Ilo wareedyo muhiim ah oo qarinay magacyadooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan ayaa khaatumonews u sheegay inay jiraan kooxo lala xariirinayo dagaalamayaasha Al-shabaab oo lacag ka dalbaday shirkadaha qaatay qandaraaska dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar oo hadda billow ah.
Dhowr jeer ayay soo wactameen waxeyna dalbadeen lacag aan yareyn iyagoo dadka ugu yeeraya meel ka mid ah Shabeellada Hoose si loo xaqiiqsado inay iyagii yihiin, waxaana laga codasaday in qolada howsha waddo isku laabato jawaabna la soo siiyo,” ayuu yiri mas’uul aan magaciisa qarinay oo xog ogaal ka ah arrimaha ku saabsan mashruucaan lagu dhisayo wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho.
Previous Post: Dog Deg Daawo:Qodobo ka soo baxay shirkii muqdisho,
Next Post: Deg Deg Daawo:ciidanka puntland oo gacanta ku dhigay Kaadhadhka codka SNM
Taasaad rajo ka sugeysaa.
Ku jir riyo maalmeedkaaga.